Wararka Maanta: Isniin, Mar 19, 2018-KOORE “ Imaaraadka waan isku afgaranay dhamaan qodobadii aanu hor dhignay”
Isniin, Maarso, 19, 2018 (HOL) – Weftigii uu hogaaminayey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta dalka dib ugu soo noqday ka dib markii muddo ku maqnaa dalka Imaaraadka Carabta.
Wasiirka Khayraadka Biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore oo weftiga madaxweynaha ka mid ahaa oo afka weftiga ku hadlayey ayaa sheegay inay booqashadii Imaaraadka ay kala kulmeen arrimo farxad galinaya shacabka Somaliland,isla markaana waxyaalo badan oo ay hor dhigeen Imaaraadka Carabta ay isla qaateen.
“weftigi uu madaxweynuhu hogaaminayey waxa loo soo dhoweeyey si qaranimo ah ,waxaana madaxdii aanu la kullanay ee Imaaraadka Carabta isla qaadanay dhamaan qodobadii aanu hor dhignay, taas oo farxad u ah shacabka Somaliland, sidaad og tihiin waxa hal hays u ah xukuumadan cusub ee ololaha ku galnay weedha ah hore loo soconayaa, dib cid aanu u eegayan ma jirto qarankuna wuu dhaqaaqay”ayuu yidhi Koore oo ku hadlayey afka weftiga.
Sidoo kale, waxa uu sheegay in Somaliland ay yeelatay saaxiibo badan, waxaanu yidhi “ waxaanu leenahay saaxiibo aanu ku kalsoonanay oo na garab taagan, waxaanu aad ugu mahad celinaay dawladda na marti qaaday waxaanu idin leenahay dadka somaliland qalbigiina wanaag u sheega, wax aanu ku faraxnay oo idinka idin farxad galin doonna ayaanu kala kulanay dalka Imaaraadka Carabta, waxaaana la kulanay madax badan oo ka tirsan wasiiradda.”.
Dhinaca kale, Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng:Faysal Cali Waraabe oo ka mid ahaa weftigan ayaa sheegay in Imaaraadku balan qaadeen in xoolaha nool dalkooda loo dhoofin doono,isla markaana ka caawin doonaan in SUcuudiga xoolihii loo dhoofin jirey uu fasaxo, waxa kale oo uu carabka ku adkeeyey in la ogolaaday in Passporka Somaliland lagu tago dalka isku taga iMaaraadka.
“Xoolihii waa la ogolaaday oo Imaaraadka waa loo dhoofinaya, Sucuudigana way ka hawlgalayaan sidii uu xoolaheena u fasaxi lahaa, xaga amniga gacan weyn bay inaga siinayaan oo hadda waxaanu kaga nimid taliyeyaashii ciidamadeenna”
Waxa dalka Imaaraadka kaga hadhay guddi farsamo oo fulin doonna qodobaddii lagu wada hadlay, waxaaanay kala yihiin taliyeyaashii ciidamadda, wasiirka Isgaadhsiinta, wasiirka Xanaanada xoolaha iyo Kalluumaysiga, Gudoomiyaha Baanka dhexe iyo xubno kale.